राष्ट्रिय समाचार Archives - Page 76 of 78 - देश विकास डटकम
प्रेममा परेपछि केटीहरुले देखाउने यी हुन् ५ ब्यवहार
जव कुनै पनि केटी पुरुषसँगको सम्बन्धमा आउँछे उसमा बदलाव आउँछ । हुन त केटीलाई बुझ्न कसैले पनि सक्दैन पनि भनिन्छ तर कसैकै गर्लफ्रेण्ड बनेपछि केटीहरुमा बदलाव आउँछ । उनीहरुमा आएको बदलाव बुझ्न त्यति कठिन हुँदैन । यस्ता बदलाव कुनै चिजसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् । अचानक मुड परिवर्तन हुने, स्वभाव बदलिनु इत्यादि । प्रेममा परेपछि केटीमा के
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको ‍‌आदेश
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । २०७४ साल वैशाख १४ गते अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशबाट सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरिएको
चन्द्रागिरी नजान आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकी दूतावासको अाग्रह
काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ नागरिकलाई चन्द्रागिरि केबुलकारसहति काठमाडों वरपर घुमफिरमा नजान भ्रामक ‘ट्राभल्स एड्भाइजरी’ जारी गरेको छ । कुनै कम्पनी विशेषलाई मात्रै जोडेर अमेरिकी दूतावासले पहलिो पटक जारी गरेको यस्तो एड्भाइजरीप्रति नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आपत्ति जाएको छ । माओवादी युद्धमासमेत यस्तोखाले एड्भाइजरी जारी नभएको जानकारहरु बताउँछन् । दूतावासले गत शुक्रबार एड्भाइजरी जारी गर्र्दे
नयाँ शक्ति काठमाडौं संयोजकमा मानुषि यमी भट्टराई
भरतपुर । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले काठमाडौं जिल्ला संयोजकमा मानुषि यमी भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यमी पार्टीका संयोजक डा. भट्टराई र नेतृ हिसिला यमीकी एक्ली छोरी हुन् । यमी लामो समयदेखि विद्यार्थी र प्रवास पार्टीमा क्रियाशील रहँदै आएकी छिन् । पार्टीको तीन नं. प्रदेशको विहीबार भरतपुरमा सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बुधबारबाट
मुग्लिन सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति तीन महिना थपिएको छ । विभिन्न समयमा काम गर्न नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले मिति थप्न माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले एक हजार दिनसम्म मिति थपको माग गरेको भए पनि तीन महिना मात्रै थपिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार पहिलो खण्डलाई १० मे, दोस्रो खण्डलाई
सात दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन संचार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मातहतका निकायलाई सात दिनभित्र आ–आफ्ना निकायको परिणाममुखी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मातहतका संघसंस्थाका प्रमुखलाई आगामी तीन/चार महिनाभित्र लागू हुने गरी उद्देश्य र लक्ष्यसहितको कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘दुईदेखि तीन पृष्ठको कार्ययोजनामा संस्थाले के काम गर्दैछ,
दाेश्राे विवाहकाे वारेमा के भन्छिन स्वेता खड्का ?
काठमाण्डाै । अभिनेत्री स्वेता खड्काले बाल्यकालदेखि नै अाफु कमलो मनकाे भएको प्रतिकृया दिएकी छिन् । सानैदेखि केही भयो कि झट्ट रोई हाल्ने भएका कारण धेरैले उनलाई बट्टाई हर्ट र ब्रोइलर कुखुरा भन्ने गरेको बताइन् । किनभने ब्रोइलर र बट्टाई हर्ट अलि कमजोर हुने र केही भयो कि फ्याट्ट ढलि हाल्ने भएका कारण उनलाई यो नाम
एसइई परीक्षा पहिलो दिन देशभर शान्तिपूर्ण
भक्तपुर । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बिहीबार शान्तिपूर्णरुपमा देशभरका एक हजार ९५६ परीक्षा केन्द्रमा एकैसाथ सन्चालन भएको छ । बिहीबार बिहान ८ बजेबाट ११ बजेसम्म भएको उक्त परीक्षा देशभर शान्तिपूर्णरुपमा सन्चालन भएको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । पहिलो दिन बिहीबार अंग्रेजी विषयको परीक्षा सन्चालन भएको छ । यस वर्ष परीक्षामा अनिवार्य विषयतर्फ गणितबाहेक
काठमाण्डौँमा भएको दुर्घटनामा नुवाकोट बेलकोटगढीका एकको मृत्यु, एक घाईते
काठमाण्डौँ । गएराती १२ बजे बालाजु चोकमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ बिजुलीको पोलमा ठाक्किएर भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक नुवाकोट बेलकोट गढी नगरपालिका–३ का २१ वर्षिय सुनिल पुडासैनिको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । पुडासैनिको उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकल पछाडी सवार घाइते नुवाकोट बेलकोट – ५ का नवराज मुडभरीको सोही अस्पतालमा